Phupha ngeJunco Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga noJunco. Ukutolikwa kwephupha kungahluka ngokuxhomekeke kumava akho nakwiimeko zakho zobuqu. Eli nqaku liza kukunceda ukuba wazi intsingiselo yengqondo kunye / okanye yokomoya yamaphupha.
Iinduku sisityalo somgxobhozo. Oku kunokufikelela kwiimitha ezine ukuphakama kwaye ubonise ukukhulisa okunamandla kakhulu. Rhoqo "ukuma kwengcongolo" okupheleleyo kubangelwa sisityalo esinye.
Iingcongolo zinika indawo yokuhlala kwiintaka ezininzi. Ukuba induku ifumana iimeko ezifanelekileyo, ibonisa ubukhosi obukhulu kwaye ikhawuleza ibususe enye ingca yasendle. Iingcongolo zifumaneka ikakhulu kumanzi ahamba kancinci, kodwa nakumgxobhozo wasentwasahlobo nakwiidlelo zasemorland.
1 Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngaphakathi ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, uphawu "lwengcongolo" lwephupha lufuna ukubonisa umaphuphi ukuba anokuziqhelanisa kakuhle neemeko zokuhlala.
Lo ulungelelaniso ayiveliswa bubuthathaka okanye ukungaqiniseki. Ngokuchasene noko, umphuphi wenza ngengqiqo nangabom ebomini. Kwakhona, ngenxa yokuba bhetyebhetye kwakhe, akazityesheli, uyaqonda ukuba oku kukuziphatha okwethutyana. Umphuphi uyaguqa kuphela kwinqanaba elithile kwiimeko, ade azitshintshe.
Ukuba uguquko lwesityalo luphambili ephupheni, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kuyakuqonda, nangona kunjalo, njengesicelo kumphuphi ukuba aqhelane ngakumbi nobomi. Ukugcina isikhundla sakho sokuzingisa akuyi kukuqhubela phambili kule ndawo ukuyo ngoku. Kuya kufuneka ivumelane neemeko ezifana nengcongolo ephupheni.
Ngamanye amaxesha, uphawu lwephupha "ingcongolo" lunokuqondwa njengophawu lokungazithembi komphuphi kwimiba ethile.
Nabani na ojonga iingcongolo ephupheni lakhe kuthetha ukungakhathali ebomini babo. Kuba ngokwenza njalo, uya kuzenzakalisa. Umphuphi kufuneka alumke nabahlobo bakhe, kuba ayingabo bonke abathembekileyo kuye. Ke ngoko, kufuneka ucinge ngononophelo ngobomi bakho. Ngamanye amaxesha uphawu lwephupha "ingcongolo" kananjalo ngokubanzi lubhekisa kumbangi kwimicimbi yothando.
Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha lomhlanga kubonisa uguquko lowaphuphi. Kwangelo xesha, olu phawu luphupha lukhatshwa sisilumkiso sokungathembeki kunye nesigqibo. Lowo uphuphayo kufuneka ahloniphe umbono wabo kunye nezimvo zabo. Indlebe yengcongolo njengophawu lwephupha ichazwa ngokuchazwa kwengqondo ephupheni njengophawu lwesini sendoda.
Ukuba ukubuyela umva kuphakathi kweengcongolo ephupheni lakho, kubonisa inyathelo lokuthatha isigqibo ebomini babo. Kuba okwangoku ukwimeko eyingozi ekufuneka uphume kuyo ngokukhawuleza.
Ukuba umphuphi uyayisika ingcongolo kwaye ayizise emhlabeni, iya kumbonisa ukuba sele eyibonile ingozi yemeko yakhe. Uyazi ukuba kufuneka enze into kwaye sele eza kukhululeka. Emva koko, uya kuba nakho ukuqhubeka ngempumelelo nomendo wakho ebomini.
Uphawu lwephupha «ingcongolo» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yephupha lokomoya, uphawu lwephupha «ingcongolo», ebonwa njengesityalo, yalatha kumjikelo wobomi kunye amandla abalulekileyo lowaphuphi.